Nayakhabar.com: दुर्इ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँदैछ फोरजी, कुनकुन स्मार्टफोनले सपोर्ट गर्छ ? थाहा पाउनुस्
दुर्इ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँदैछ फोरजी, कुनकुन स्मार्टफोनले सपोर्ट गर्छ ? थाहा पाउनुस्
काठमाडौं । तपाईं नयाँ मोबाइल वा ट्याब किन्दै हुनुहुन्छ, एकपटक सोच्नुहोस्, तपाईंले किनेको मोबाइलले फोरजी सपोर्ट गर्छ कि गर्दैनरु किनकि नेपालमा दुर्इ महिनाभित्र चौथो पुस्ताको इन्टरनेट प्रविधि फोरजी सेवा आउँदैछ।
फोरजी सपोर्ट नगर्ने मोबाइलमा फोरजी चलाउन सकिँदैन। नेपालमा बिक्री भइरहेका सबै स्मार्टफोनमा फोरजी चल्दैन। यहाँ बिक्री भइरहेका होमग्रोन ब्राण्ड र विदेशी ब्राण्डका स्मार्टफोन सबैमा फोरजी सपोर्ट गर्दैन।
नेपालमा बहुप्रतीक्षित भनिएको फोरजी सेवाका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले आवेदन दिएका छन्। प्राधिकरणले साउन महिनावाट सेवा विस्तार गर्ने भने पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले दुई महिनाको समय माग गरेपछि कात्तिकबाट यो सेवा आउन लागेको हो।
के हो फोरजीर
फोरजी अर्थात् फोर्थ जेनेरेसन एकखाले नेटवर्क हो। फोरजी थ्रिजीको विकसित रुपको नेटवर्क अन्तर्गतको मोबाइल टेलिकम्युनिकेसन प्रविधि हो। फोरजी प्रणालीले इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन ९आइटियु० ले व्याख्या गरेअनुसारको सुविधा प्रदान गर्छ। यो सेवामा मोबाइल वेब एक्सेस, आइपी टेलिफोनी, गेमिङ सर्भिस, हाई डेफिनेसन मोबाइल टिभी, भिडियो कन्फेरेन्सिङ, थ्रिडी टेलिभिजन र क्लाउड कम्प्युटिङ पर्छन्।
फोरजी चल्ने स्मार्टफोनहरु
एप्पल, हुवावे, कलर्स, जिओनी, सामसुङ, माइक्रोम्याक्स, शाओमी छन् । यी बाहेक नोकिया, सोनी, लेनोभो लगायतका कम्पनीहरुका पनि फोरजी सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोनहरु बजारमा आउँदैछन्।